IAC®လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
နည်းပြ၏ပိတ်ပင်အဓိပ္ပာယ် "နည်းပြပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိအမြင်, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပြီး, ဖြစ်နိုင်ချေများတိုးချဲ့။ " ကမ္ဘာတဝှမ်းအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်အများအပြားပညာရှင်များနည်းပြသို့ကူးပြောင်း, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အလေ့အကျင့်အတွက်နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးအတွက်နည်းပြချဉ်းကပ်ကိုသုံးပါကြသည်အတိုင်း, IAC®လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်™ကြှမျးကနည်းပြ၏ကွဲပြားအရည်အသွေးတွေပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ဤရွေ့ကားအရည်အသွေးတွေကိုကျနော်တို့က Mastery အဖြစ်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှတ်တွင်ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်။ ဤသည်မှာလက်မှတ်ဖြစ်စဉ်ကိုအောင်မြင်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်နှံ့နှံ့စပ်စပ်သဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းလိုအပ်သည်။ အဘယ်သူမျှမအထူးသဖြင့်နည်းပြလေ့ကျင့်ရေးနည်းလမ်းမလိုအပ်ပေမဲ့, ဤကျွမ်းကျင်မှုစုံ၏ဗဟုသုတနှင့်လျှောက်လွှာကျွမ်းကျင်ဖြစ်ကြောင်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ အဆိုပါပိတ်ပင်သည့်နည်းပြ၏နည်းပြစတိုင်အကဲဖြတ်ရန်ပေမယ့်သရုပ်ပြတန်ဖိုးသည်နည်းပြများက, အ9ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ၏ပါဘူး®. နည်းပြကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအဆိုပါIAC®မှာတိုင်းတာသောအားဖြင့်စံချိန်စံညွှန်းများဦးဆောင်အစွန်းဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု, အချိန်ဂုဏ်ပြုအတွေးအခေါ့်ပညတ်နှင့်နည်းပြဆက်ဆံရေး၏လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အား။
အလုပ်အကိုင်ကြီးထွားလာသည့်နည်းပြများနှင့်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာနှင့်ပြောင်းလွဲမှုများကိုနည်းပြများ၏အလေ့အကျင့်နှင့်အမျှပိတ်ပင်ထောက်ဖို့အထူးဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုတိကျခိုင်မာစွာလက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်နည်းပြ၏အကြိုးစီးပှားတိုးနှင့်တစ်လောကလုံးထူးချွန်၏အမြင့်ဆုံးလူ့စံနှုန်းများကိုတိုးတက်နေသည်။ ဒါကIAC® certified ရရှိထားပြီးနည်းပြ၏အမာခံများဖြစ်ပါသည်
Master နည်းပြ ရ ဦးဆောင်အစွန်းဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုတစ်စိတ်အားထက်သန်လူ့နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု၏အသိအမြင်နှင့်မည်သို့သောဤထိထိရောက်ရောက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အားကောင်းလာစေပါတယ်။ အဆိုပါရှုထောင့်ပြောင်းလဲဆန်းသစ်နှင့် client ကိုဗဟိုပြုနည်းလမ်းများ generate နိုင်စွမ်း, အရှင်ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးချဲ့နှင့် Co-ခြင်း၏အရေးပါမှု ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ဆန်းရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အစီအစဉ်ကိုဝေဖန်ကြသည်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ IAC ၏အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားသည္ အလင္းျပျခင္းကိုရွင္းလင္းစြာနားလည္ျခင္း ႏွင့္ အဆိုပါ9ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ၏သရုပ်ပြ။ အဆိုပါလက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျးအွန်လိုင်းမှစမ်းသပ် (သင့်အသိပညာနှင့် Mastery ၏အသိအမြင်, ဥပဒေရေးရာနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများတန်ဖိုး) နှင့် MPDP တစ်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ (ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည်Mastery Professional ဖြံ႕ ျဖိဳးေစေရးအစီအစဥ္မ်ား) အရာအဘို့သင်IAC®သတ်မှတ်ပေးထားခြင်းဏလက်ခံရရှိရန်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်စေခြင်းငှါf Mastery Practitioner. ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသင်လက်တွေ့ကျတဲ့လျှောက်လွှာကိုသရုပ်ပြဘယ်မှာမိနစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောနည်းပြအစည်းအဝေးများ, 30 နှစ်ခု, 45 ၏လကျအောကျခံပါဝငျသညျ။ အဆိုပါလက်မှတ်ရေးကျောမတီသငျသညျလျှောက်ထားပုံကိုကောင်းစွာအကဲဖြတ်နှင့်9ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်® သင့်ရဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားသောနည်းပြအစည်းအဝေးများအတွက်။